Mampiasa Twitter ito Breziliana ito Mba Hanehoana Ny Fahasiahana Sy Ny Fanavakavahana Ataon’ny Mpampiasa An’ireo Mpiasa An-Tranony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2014 6:06 GMT
Vakio amin'ny teny Français, اردو, Español, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
Tamin'ny herinandro lasa teo, nanomboka namerina nandefa hafatra fohy mahatohina, masiaka ary feno fanavakavahana alefan'ireo mpampiasa an-trano Breziliana indray ny kaonty Twitter @aminhaempregada (ny mpiasa an-tranoko).
Manome topimaso amin'ny fahavoazana ara-tsosialy, ny fanavakavahana ary ny tsy fahaizana manakatra ny fihetseham-pon'ny hafa izay miseho ao amin'ny fiarahamonina Breziliana ilay kaonty amin'ny fiteny Portigey, indrindra ny toetran'ny olona amin'ireo mpiasa an-trano. Misy mpanaraka efa miisa eo ho eo amin'ny 10k eo ilay kaonty hatreto.
Araka ny Ivontoerana Breziliana misahana ny jeografia sy ny antontanisa (IBGE), vehivavy avokoa ny 92 isan-jato amin'ireo mpikarama an-trano miisa 7.2 tapitrisa, ary amin'ireo vehivavy ireo, mainty hoditra ny 60 isan-jatony.
Naorinà ooona iray manampahaizana amin'ny dokambarotra, 33 taona, avy ao Sao Paulo, tsy tia ho fantatra anarana, ny kaonty Minha Empregada. Maro amin'ireo famerenana hafatra fohy avy amin'ireo mpampiasa no mampiseho ny fanavakavaham-bolon-koditra rehefa mitaraina momba ireo mpiasa an-tranony izy ireo:
Tahaka ny anehoan'ny mpamorona ilay kaonty ao anatin'ny sasany amin'ireo hafatra fohiny, maro amin'ireo olona no naka ireny famoahany ireny, nanao izay mahamenatra ireo mpiasa an-tranony, ary miezaka ny manamarin-tena sy mandà ho tsy mpanavakavaka izy ireo. Ny Twitter sasany – toy ny @NãoSouHomofóbico (Tsy manaratsy ireo lahy samy lahy na vavy samy vavy miaraka aho) ary koa ny @NãoSouRacista (Tsy mpanavakavaka aho) – manamarina ny fahasahiranan'ny Breziliana hiala amin'ny fanavakavahany, ny firehana ara-pitiavana ary fomba fitsaràna olona hafa koa.
Lahatsoratra iray navoakan'ny gazetiboky mirona amin'ny elatra havia Carta Capital ary naverin'ny Ivon-toeran'ny Vehivavy Mainty Hoditra Geledés navoaka no manasongadina mazava tsara ny elanelana ara-tsosialy ao ambadik'io olana io:
Noravàn'i Brezila tamin'ny taona 1888 ny fanandevozana, raha izy no lasa firenena farany tany amin'ny faritra Andrefana [en] nanao izany. Na dia izany aza, maro amin'ireo vehivavy vao nahazo fahafahana no manao fitadiavam-bola amin'ny fiasàna an-trano satria tsy mahazo fampianarana na fanofanana arak'asa, lova izay mbola mitohy hatramin'izao ankehitriny izao.
Nihatsàra ny toeran'ireo mpikarama an-trano ao Brezila rehefa nandeha ny taona. Ankehitriny, vitsy dia vitsy amin'ireo mpiasa an-trano no mipetraka ao amin'ny tranon'ny mpampiasa azy (izay toerana tokony hahavonona azy amin'ny fotoana rehetra, andro sy alina), ary noho izany lasa mahaleotena kokoa sy afaka mametra karama ambonimbony kokoa amin'ny asa ataony izy. Na dia izany aza, mbola mitohy hatrany ny toetra tsy fahalalam-pomba sy fanambaniana ireo mpikarama an-trano.
Tamin'ny taona lasa teo, tao aorian'ny adihevitra nampalahelo, voalohany izao vao nanaiky ny hanova ny lalàm-panorenany i Brezila, mba hiarovana ny zon'ireo mpikarama an-trano. Na dia efa nolanian'ny Antenimieran-doholona aza ny lalàna, mbola miandry hofidian'ny ao amin'ny Antenimieran'ny Solombavam-bahoaka izany, ary aorian'izay vao afaka ampiharina.